19-ka degel ee ugu fiican Sawirro Tayo-sare oo Bilaash ah | Abuurista khadka tooska ah
Manuel Ramirez | | Sawir, Khayraadka
Bogag internet oo sawir leh oo bilaash ah, oo tayo sare leh ayaa si fudud looga heli karaa webka si ay kuu caawiyaan u isticmaal iyaga si kor loogu qaado waxyaabaha aan u qaadano shabakadaha bulshada, ku dar sawir shirkadeed adeeg gaar ah ama shaqo jaamacadeed halkaas oo ay tahay inaan tusno taabashada weyn ee ay tahay inaan ogaanno sida loo doorto wax muuqaal ah oo soo jiita dareenka.
Marka xigta waad heli doontaa ugu sareeya 19 shabakadaha sawir furan ee furan tayo sare leh. Xitaa shabakadahaas, sida pixabay, waxay kuu oggolaaneysaa inaad soo dejiso qaabka ugu ballaadhan uguna sarreeya haddii aad sameysato koonto bilaash ah. 19 websaydh ah oo ay tahay inaad calaamadeysato si aad uga hesho waxyaabo aad u fiican sawirada nooc kasta oo adeegsi ah.
5 IM lacag la'aan ah
7 Nolosha Pix
9 Meelaha aan xuneyn
12 Jamhuuriyadda ISO
13 Lacag La'aan
17 Sawiro Hantidhowr
19 Suuqa cusub ee Old
Waxaan ku bilownay Pixabay inaan ahaado websaydhka sawir qaadista sawir furan heer sare. Waxaad marin u heli doontaa in ka badan 490.000 oo sawirro iyo fiidiyowyo isugu jira adeegsi shaqsi iyo ganacsi. Dhamaan sawirada boggan waxaa shati ka haysta liisanka 'Creative Commons CS0 licence', oo macnaheedu yahay in wax laga badali karo oo ganacsi ahaan loo adeegsan karo.
Xaqiiqdii websaydhkan dad badani ma yaqaanaan, laakiin haddii aan ku darno Shopify, hubaal waxaad bilaabi doontaa inaad la xiriirto mid ka mid ah goobaha ugu caansan eCommerce ee hadda jira. Xaqiiqdu waxay tahay Dukaan fur Burst si aad u bixiso sawir furan oo furan tayo sare leh si ay u isticmaalaan dadka isticmaala. Adiguba dhammaantood adigaa iska leh.
Websaydh kale oo sawir sawir leh oo tayo leh oo laga yaabo inaadan ka aqoon. Waana sababta oo ah waxay dhalatay sanadkii 2013 iyadoo leh fikradda ah inaad ku haysato sawirro kala duwan fartaada si aad ugu tuurto sidaad rabto. Guud ahaan waxay kala yihiin 600 sawiro qaraar sare oo bilaash ah oo ka kooban qaybo kala duwan. Ikhtiyaar kale oo loo tixgeliyo sawirro tayo sare leh.
Boggan waxaan ku leenahay sawir qaade Ryan McGuire oo bixinaya sawiradiisa gebi ahaanba bilaash ah oo xallin sare leh. Sawirada waxaa laga helay noocyo kala duwan sida xayawaanka, walxaha ama dabeecadda iyo waliba kuwa kale oo badan. Toddobaad kasta waxaad awoodi doontaa inaad kaydiso sawirrada cusub ee sawir-qaadahaan soo rogayo.
Sida hal ku dhiggeedu ka muuqanayo bogga ugu weyn ee IM Free, waxaad ka heli doontaa a ururinta si fiican loo xushay ee noocyada naqshadeynta websaydhka adeegsi ganacsi. Waxyaabahaas uruurinta ah waxaad ka heli doontaa sawirro nooc walba leh si aad ugu darto tayada shaqadaada oo dhan, ha noqoto baloog, eCommerce, bogga Soo Degitaanka ama degel internet ah. Mid ka mid ah waxyaabaha lagama maarmaanka ah.
Isaga oo sannadihiisii ​​horeba uga dambeeyay, Morguefile wuxuu bixiyaa in ka badan 350.000 oo sawirro bilaash ah tayo sare leh ganacsi iyo adeegsi shaqsiyeed. Waxa kaliya ee sawirrada qaarkood ay ku muteystaan ​​sawir qaadaha haddii aan rabno inaan adeegsanno.
Websaydh kale oo sawir sawir furan oo bixiya aruurinta sawirro tayo sare leh. Waa inaan ku bogaadinaa naqshadda weyn ee shabakaddu la leedahay qaar ka mid ah walxaha webka ee xiisaha weyn leh, sidee kuwani noqon karaan. Waxaan xusnay in qeyb ka mid ah sawirradu ay yihiin oo ay ku deeqday Hay'adda Xayeysiinta Leeroy ee Montreal iyada oo aan wax xaddidaad ahi jirin. Sawirada aad ka heli doontid warbaahinta bulshadaada ama shaqooyinka websaydhka ayaa leh tayo aad u tiro badan.
Waa mid kale oo ka mid ah websaydhada ugu cajiibka badan, in kastoo adeegsadaa kuwa kale sida Gratisography-ka aan soo sheegnay ama Unsplash. Dhammaan sawirradu waxay ku hoos jiraan liisanka 'Creative Commons Zero', markaa waad ogtahay waxa loola jeedo. Degel kale oo tayo leh si aan u haysano liis ay tahay inaan gacanta ku hayno noocyo badan oo sawiro furan ah.
Haddii sabab kasta ha noqotee aadan heli karin sawir gaar ah, u gudub dhinaca 'Negative Space' si aad uga baadhid mashiinkeeda raadinta ama mid kasta oo ka mid ah noocyada tayada boggan shabakadda sawir ee furan. Toddobaad kasta waxaad heli doontaa sawirro cusub oo aad u jeesato ka dibna aad wax ka beddesho oo aad ku daabacdo shabakadahaaga bulshada.
Bog internet ah, marka laga reebo adeegsiga a naqshad weyn oo ku saabsan websaydhka si loo siiyo khibrad weyn Isticmaal ahaan, waxay adeegsataa sawirro taxane ah oo isha furan oo aad u xaadir ah sababo la xiriira bilicdooda muuqaal ahaan. Mid ka mid ah faa'iidooyinkeeda ayaa ah inay bixiso midabada ugu badan ee sawirka. Qiimo aad u weyn ayaa boggan loogu talagalay naqshadeeyayaasha. Raaxo dhab ah.
Qiimaheeda ugu weyn ee la kordhiyay waa ujeedada uu dejiyay RawPixel sawir dadka adduunka oo dhan, sidaa darteed haddii ay tahay inaad raadiso waxa ku jira, waa degel tixgelin siinaya sawirro tayo sare leh oo furan oo furan. Degel kale oo xisaabta lagu darsado nooc kasta oo xirfadlayaal ah noocyadeeda iyo xarrago ahaan.
Websaydhkan waxaad ka heli kartaa dhammaan noocyada kala duwan ee laga yaabo inaad u baahato noocyo badan oo maadooyin ah inaad ka bixinayso degel kasta ama shabakad bulsheed oo aad rabto inaad ku qalabeyso macaan weyn oo muuqaal ah. Mid kale oo cusub oo laga yaabo in dad badani ogeyn.
Beddel kale oo ah websaydh tixraac ah oo loogu talagalay sawirrada il furan iyo tan ayaa leh ujeedadiisu tahay in la tuso meeraha halkii kaas oo aan badanaa ku soconno maalinba maalinta ka dambaysa. Mid kale oo ka xiiso badan inaad kuhesho waxyaabaha ugu cadcad si aad uhesho ilo tayo iyo tixraac kale.
Maaha markii ugu horreysay ee Unsplash ay xariiqdeenna u soo mariso duub diiwaanka weyn ee sawirrada il furan taasi waxay leedahay mid ka mid ah martida soo dhex marta. Waxay u qalantaa 10 sawir oo cusub 10kii maalmoodba mar iyada oo loo marayo websaydhkaaga ama ku qoritaanka emaylkaaga. Sida kuwa kale, waxaad u isticmaali kartaa sawiradooda adeeg ganacsi iyo mid shaqsiyeed.
Mid ka mid ah waxyaabaha gaarka ah ee boggan sawir-qaadashada il furan waa in lagu bixiyo sawirro taas Sheeg shucuur ama sheeko sheeg. Nooca noocan ah wuxuu ku habboon yahay warbaahinta bulshada ama inuu macno u yeesho kuwa sawirrada xayeysiinta ama shirkadaha leh. Maalin kasta waxay bixisaa laba sawir oo ay sameeyeen xirfadlayaal si aad uga soo dejisan karto iyaga oo bilaash ah. Mid kale oo ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan.
StockSnap waxay isticmaashaa awooda lagu shaandheeyo sawiro furan oo bilaash ah maalinta, isbeddel, tirada booqashooyinka ama soo dejinta, iyo sidoo kale keywords kale oo taxane ah si loo helo sawirkaas aad ugu baahan tahay shaqadaada. Mid kale oo taabasho gaar ah leh oo tayo sare leh.
Shabakad xoojineysa sawirka ilaha furan xiriir dhow la leh tikniyoolajiyadaha cusub. Gaar u ah boggaga internetka ama boggaga laxiriira aaladaha mobilada ama qalabka kombiyuutarka, si ay ugu muujiyaan qaab xarago leh isticmaalka ay u isticmaalaan alaabadooda
Sawirada sawir qaadahani waa mid aad u xiiso badan oo awood u yeelan doona qabso dareenka kuwa raacsan haddii midkoodna ka mid noqon karo qayb ka mid ah waxyaabaha ay ka kooban tahay warbaahinta badan ee aad iyaga ka heli karto.
Suuqa cusub ee Old
Haddii waxa aad u baahan tahay ay yihiin sawiro guridda sanadka of strip, New Old Stock waa shabakadda heer sare laga bilaabo maanta iyo inaad u baahan tahay inaad ku darto waxyaabaha aad ugu jeceshahay si aadan u seegin mid kasta oo ka mid ah tayada sawirrada madow iyo caddaan ah.
Haddii aad wax badan dooneysay, halkan wax badan ayaa kaaga yaal degellada si aad u soo dejiso sawirrada il furan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sawir » Websaydhyada ugu wanaagsan ee lagu soo dejisto sawirrada isha furan